Maxkamad ku taalla Uganda oo dambi ku heshay ninki soo agaasimay qaraxi Kambala – Radio Muqdisho
Maxkamad ku taalla Uganda oo dambi ku heshay ninki soo agaasimay qaraxi Kambala
Maxkamad ku taalla magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa dambi ku heshay Isa Ahmed Luyima iyo 12 kale oo loo heysto weeraradii argagixiso ee sanadkii 2010 Shabaab ku qaysatay magaalada Kampala, kaasoo ay ku dhinteen 74 ruux.
Xaakimka Maxkamadda ayaa lagu wadaa inuu go’aan ka gaaro dacwadan oo soo socotay tan iyo sanadkii 2010,
Isa Ahmed Luyima ayaa la sheegay in xilligii uu dhacayay qaraxa Kampala uu ka soo gudbay xuduudda Kenya iyo Uganda, isla markaana uu soo abaabulay weeraradaas.
Shan ka mid ah dadka la soo eedeeyay ayaa u dhalatay dalka Uganda, 2 Tanzania iyo 6 u dhalatay dalka Kenya.
Maxkamadeynta dadkan ayaa qaadatay muddo lix sano ah, iyadoo Maxkamadda ay wixii ka dambeeyay weeraradii Kampala ay dhageysaneysay dacwadda loo heysto 13 qof oo horay ciidamada ammaanka ay howl galo ugu soo qabteen.
Ammaanka magaalada Kampala ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo si aad ah looga dareemay maxkamadeynta ragga loo heysto weeraradii Kampala ka dhacay.
Marwada madaxweynaha dalka oo xaflad Ankara uga qeyb-gashay+SAWIRRO
Obama oo maanta booqanaya magaalada Heroshima ee dalka Japan